Tantara: Jesosy tao An-jaridaina - Tranonkala Ofisialin’ny Vavolombelon’i Jehovah
REHEFA nandao ny eﬁtra ambony rihana i Jesosy sy ny apostoliny, dia nankany amin’ny zaridainan’i Getsemane. Efa nanketo imbetsaka izy ireo teo aloha. Izao i Jesosy dia nilaza tamin’izy ireo mba hiambina sy hivavaka. Dia nihataka lavidavitra kely izy ary niankohoka tamin’ny tany mba hivavaka.
Nanontany i Jesosy hoe: ‘Ry Jodasy, fanorohana va no amadihanao ahy?’ Eny, ny fanorohana dia famantarana. Nahatonga ireo olona niaraka tamin’i Jodasy izany hahafantatra fa io no Jesosy, ilay lehilahy notadiaviny. Koa nandroso ireo fahavalon’i Jesosy mba hihazona azy. Nefa i Petera dia tsy hamela azy ireo hisambotra an’i Jesosy tsy misy ady. Notsoahiny ny sabatra izay nentiny ary namely ny lehilahy teo akaikiny izy. Tsy nahavoa ny lohan’ilay lehilahy ny sabatra fa nanapaka ny soﬁny ankavanana kosa. Nefa nokasihin’i Jesosy ny soﬁn’ilay lehilahy ary nositraniny.
Taiza no nalehan’i Jesosy sy ny apostoliny, rehefa niala tao amin’ilay eﬁtra ambony rihana izy ireo? Ary inona no nasain’i Jesosy nataon’izy ireo?
Inona no hitan’i Jesosy, rehefa niverina teo amin’ny toerana nisy ny apostoly izy, ary impiry no nisehoan’izany?
Iza no tonga tao amin’ilay zaridaina? Inona no nataon’i Jodasy Iskariota, araka ny hita eo amin’ny sary?
Nahoana i Jodasy no nanoroka an’i Jesosy, ary inona no nataon’i Petera?
Inona no nolazain’i Jesosy tamin’i Petera? Nahoana anefa i Jesosy no tsy nangataka tamin’Andriamanitra mba handefa anjely?
Ahoana no ﬁheveran’i Jesosy ny fampiasana ﬁtaovam-piadiana mba hamelezana olon-kafa? (Matio 26:52; Lioka 6:27, 28; Jaona 18:36)
Lasa nalemy ﬁnoana ve i Jesosy, matoa tonga nampahery azy tao amin’ny zaridainan’i Getsemane ny anjely iray? Hazavao. (Lioka 22:41-43; Isaia 49:8; Matio 4:10, 11; Heb. 5:7)